Math Ule Generator - Olee otú Mee Math Ule
> Resource> Atụmatụ> Olee otú Mee a Math Quiz
I nwere ike iche nke na-eme a omenala mgbakọ na mwepụ akwụkwọ nwere ule na-atụle otú ukwuu ná mgbakọ na mwepụ ihe ọmụma gị na-amụ na-aghọtabeghị. Ma ugbu a, ị nwere ike mfe ike a Flash mgbakọ na mwepụ ule ma jide otu nnyocha online. Site n'enyemaka nke software dị ka Wondershare QuizCreator - a siri ike Flash ajụjụ e kere eke omume - ị nwere ike mfe ike ná mgbakọ na mwepụ quizzes na ihe oyiyi, ụda, na ọbụna videos. E wezụga, i nwere ike soro na ya pụta na ụfọdụ n'ezie mfe ụzọ. Ebe a ka anyị hụ otú na-eme ka a ná mgbakọ na mwepụ ule ajụjụ na nke a software. Ị nwere ike ibudata ya mbụ:
1 Malite a New Math Quiz
Mgbe-agba ọsọ a software, họrọ "Mepụta a New Quiz". Mgbe ahụ ị ga-ahụ serveal ajụjụ ụdị nyere. Ebe a anyị na-Multiple Nhọrọ ajụjụ dị ka ihe atụ iji gosi na ị otú ike a ná mgbakọ na mwepụ ajụjụ.
2 Design Your Math Quiz
Pịa "akụkụ" na isi menu imeghe akụkụ Editor. The akụkụ edito ke QuizCreator-enyere gị aka tinye odide, akara na arụmarụ mgbakọ na mwepụ flash ajụjụ na nkeji na-enweghị niile na-emebu nsogbu. Ị dị nnọọ mkpa pịa na ide ebe ke akụkụ na mpe mpe akwa, na ibà ederede na dị iche iche ntinye isi ihe dị ka chọrọ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ pịnye a ná mgbakọ na mwepụ nnọchianya, etinye gị òké cursor n'ime ihe akụkụ igbe, họrọ ihe nnọchianya ụdị na menu wee họrọ ihe nnọchianya ị na-achọ. I nwekwara ike mezuo nke a usoro site na iji keyboard: pịnyere ekpe na nri cursor igodo ka ịkpali cursor na ala na elu igodo ka họrọ chọrọ akụkụ igbe na-abanye na gị akara.
Wee tinye oke na Nhọrọ ederede ubi na kaa ziri ezi azịza ziri ezi na kọlụm. Nhọrọ abụọ ga-banyere dịkarịa ala, na itoolu na kasị. Images, arụmarụ, hyperlinks na Akara ókwú edezi ndị dịnụ na nhọrọ.
3 Buru a Quiz Player Template
Mgbe ọ gụchara ajụjụ kere eke, ị nwere ike bulie agụmakwụkwọ ma ọ bụ mathematic ajụjụ ọkpụkpọ template na wuru na-template gallery aka gị ajụjụ, na-eme ka ọ na anya ọzọ-ekere òkè. Ọzọkwa, ị pụrụ hazie gị ajụjụ template site onwe gị na ụfọdụ mfe ntọala.
4 ebipụta gị Math Quiz
Mgbe na-eme gị ná mgbakọ na mwepụ ajụjụ, ị nwere ike na-ebipụta ya. Ebe a na-ọtụtụ nhọrọ maka unu:
Ebipụta quizzes Online: QuizCreator Online ga-anakọta results na n'ịwa akụkọ zuru ezu banyere maka quizzes.
Bulite bipụtara Flash quizzes ka Web: N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịnakọta results na a kpọmkwem email.
N'ịwa SCORM ajụjụ ngwugwu maka òtù LMS: iwekota SCORM / AICC ajụjụ ngwugwu ọ bụla òtù LMS dị ka Moodle, bọọdụ, weèb ma ọ bụ WebCT (adịghị n'ihi QuizCreator Free).
Ebe a bụ ná mgbakọ na mwepụ ajụjụ sample. Ugbu a dị nnọọ atụmatụ gị ná mgbakọ na mwepụ ajụjụ ajụjụ na dejupụta preset ubi na-esi gị Flash ajụjụ kama!
Wedding Checklist - Wedding usoro iheomume maka ndị zuru okè Wedding Planning